Qaybtii 7aad: Xishoodka Hablaha iyo Xanuunka Jacaylka, Sheekadan waxaan daabacnay 2006dii oo dad kor u dhaafay 150 kun oo qof akhriyeen, markale si taxane ah halkan ugala soco | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wallaal hadiyada aan kuu soo diray waxay la mid tahay ta aan u diray walaashayda yar maadaama aad adiguna noqotay inantaydii saddexaad. Waxan oga jeedaa hadaynu isku weynay ama calafku iskeen sii waayay kuma aynaan kala gu’in wallaaltinimadii. Laga bilaabo imikana waxan kuu ahay wallaalkaa keliya ee aad adduunka ku leedahay. Waxanan kugula dardaarmayaa in aanad i iloobin iina xasuusnaato sidaa.
Laba maalmood ka dib imaatinkii Salma ayay Subeer gabadh walaashii ah u sheegtay inay Salma timi, waxayna ku tidhi: “Wallaal gurigii reer Abtidoon waxa yimi Salma iyo hooyadeed oo Jarmalka ka yimi.”
Subeer marar badan ayuu aabihii u soo jeediyey inuu guursado oo uu ku yidhi: “Aabbo guurso.” laakiin marmarsiinyo iyo marba horta arrin baan soo qabsanayaa ama inoo soo qabanayaa Aabbo ayuu cudur daar uga dhigi jiri diidmadiisa.
“Cajeb, tolow maxay noqon” Salma waxay geedka hoostaagnaataba oo ay wejigabax la caloolyowdaba, waxay aakhirkii go’aansatay inay u babac dhigto wejiga Subeer.
Haddalada Subeer ku tiraabay waxay dareenka Salma ku sii kordhiyeen culays saa’id ah, taas oo keentay inay tiiraanyo darteed hadalba soo rogan waydo oo ay hoos isaga foorarsato, marna wejiga Subeer ku dheygagto.
Subeer wuu sii hadlay, wuxuna haddana yidhi: “Salmaay mar haddii uu calaf ii kaa diiday, waxa aniga iga nasiib badan ninka aad ooridiisa noqotay ee aqal kugula hoyda, ubadna aad u hayso?”
Markii uu telefoonkii soo dhacay ayey Subeer wallaashii qaday oo tidhi: “Hallo, waa ayo.” Salma ayaa tidh: “Wallaal, waa aniga ee Subeer ma joogaa, Subeer baan doonayaayee.”
Subeerna wuxu ugu jawaabay, “Wallaal waan fiicanahaye, adigu iska waran.” Weedho salaan ah markii la isu celiyey ayay Salma hadalkii qaadatay, waxayna tidhi: “Wallaal Subeerow .
Guled Abdi Sheehaash – SDWO Chief Editor